Saldhigyada burcad-badeed ee Puntland - BBC Somali
Saldhigyada burcad-badeed ee Puntland
17 Juunyo 2010
Image caption Magaalada Eyl, waxay ka mid ahayd goobaha ay burcad badeedu saldhigyada ka dhigteen.
Waayadan dambe burcad-badeed fara badan, oo ku sugnaa degaanno kala duwan oo ka tirsan Puntland, ayaa la sheegayaa in ay hadda ka carareen magaalooyinka waawayn iyo meelo ay saldhiyo ku lahaayeen, oo ay ka mid tahay magaalada Eyl culays xagga maamulka kaga yimid awgeed.
Waxaa hadda si wayn loo hadal hayaa in burcadda baduhu ay u wareegeen degaanka Garacad iyo dhulka ku fidsan ilaa Xarar-dheere, halkaas oo ah dhul ay iska galaan degaanka Puntland iyo koofurta Soomaaliya.
Maamulka Puntland, wuxuu hadda qabanqaabo ugu jiraa olole burcadda lagaga sifaynayo degaanadaas.
Intii ka dambaysay ololayaal isdabajoog ahaa oo maamulku ku qaaday burcadda badaha iyo saldhigyada ay ku leeyihiin degaannada hoos yimaada magaalada Eyl iyo meelo kale oo ka tirsan gobolka Bari iyo xeebaha ku dhow Laas-qoray, waxaa isa soo tarayay in burcaddu si tartiib ah uga guurto meelahaas.
Arrintaas waxaa sii baritaaray markii ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen kadibna xabsiga dhigeen rag waawayn oo ku caan baxay burcadda, oo qaarkood loo haysto in ay ka mid yihiin xubnihii asaaska u dhigay burcadda, kuwaas oo hadda sugaya in la horgeeyo hay’adaha sharciga ee ku shaqada leh.
Tallaabbooyinkaasi waxay keeneen in bililhii la soo dhaafay magaalooyinka waawayn ee Puntland ay gabaabsi ku noqdaan dhaqdhaqaaqa burcadda badaha, oo hadda u muuqda kuwo gacan-ku- gabbad ah, iyadoo waayadii hore ay burcaddu ay jiritaan muuqda ku lahaayeen magaalooyinka oo dhan.
Meelaha ay wali joogaan
Inkasta oo ay taasi jirto haddana burcadda baduhu, waxay weli ku sugan yihiin degaanno ka tirsan Puntalnd waxayna fariisin xoog leh ka samaysteen magaalada Garacad iyo degaanka ku xeeran ilaa iyo xarar-dheere, iyagoo degaankaas u wareejiyeen maraakiibta ay haystaan qaarkood.
Dhinaca kalana, waxaa hadda socda qorshe ay iska kaashanayaan maamulka iyo waxgaradka degaankaas oo isugu jira qaybaha bulshada kaas oo lagu doonayo in burcadda laga sifeeyo degaankaas waxana dhowaan magaalada Garowe ka dhacay kulan barnaamijkaas looga arrinsanayo, oo ay ka qaybgaleen maamulka iyo mas'uuliyiinta degaankaas oo ay la socdaan waxgarad kale.
Weli lama faafin waqtiga uu dhaqangeli doono qorshaha maamulku ka damacsan yahay saldhigyada ay burcadda baduhu isku urursanayaan iyo hawlgallada ay halkaa ka wadaan waxase jirta in maalmahan dambe maamulku ku mashquulsan yahay abaabul arrintaas ku saabsan.
Puntland iyo NATO
Waxaa kale, oo iyana jiray kulamo dhowaan dhexmaray madaxda ciidamada NATO ee la dagaallanka burcadda badaha iyo madaxda maamulka ee gobollada iyo degmooyinka iyo odayaasha dhaqanka, waxaana kulamadaas looga hadlay sidii loo soo afjari lahaa saldhigyada ku yaalla Puntland ee ay ku hareen burcadda badaha, gaar ahaanna degaanka Garacad.
Garaad Max’ed Cilmi Shirwac, oo ka mid ah isimada waawayn ee Puntland, ayaa ka mid ahaa madaxdii dhaqanka ee ka qaybashay kulamadaas qaarkood, garaadka oo la hadlay BBC-da wuxuu faahfaahin ka bixiyay kaalinta ay madaxda dhaqanka iyo waxgaradku ku yeelan karaan ololaha lagu sifaynayo burcadda badaha.
Wuxuu sheegay in ay kaalin buuxda ka qaadan doonaan kadib marka ay wadatashi ka sameeyaan, oo ay dadka degaankaas ku dhaqan uga digaan dhibaatada ay burcaddu u gaystay degaankaas.
Rajada laga qabi karo
Haddii ay maamulka u hirgasho inuu cagta mariyo saldhigyada cusub ee burcadda markaa taas macnaheedu, wuxuu noqon karayaa in uu ka faraxashay qaybo laxaad leh oo burcadda ahmiyad wayn ugu fadhiday.
Laakiin waxaa suuragal noqon karta in markaa kadib ay burcaddu mar kale si teel-teel ah ugu fiddo magaalooyinka waawayn waxaana dhici karta in ay taasina u suurageliso hawlgallo ay ka sameeyaan xeebaha fog-fog ee aanay cidi joogin haddii aan dhaqso looga hawlgelin.
Maamulka, ayaa marar badan cabasho ka muujiyay gaabiska kaalmada uu caalamku ka gaysto dagaalka burcadda badaha lagula jiro walow hadda uu rajo ka qabo in arrintaasi ay wax uun iska beddelaan.